"Medicine nokuti mbuya": vatambi vavo mabasa
Modern Mini-ngaatevedzane zita kujairika "Medicine kuti ambuya vangu", rakabudiswa muna 2011, akaita zvikuru vakavhengana wongororo kubva vaoni. Vamwe vanotsutsumwa pamusoro hackneyed zvarongwa firimu, nepo vamwe vanoona mufananidzo kuti anogona kutsausa kubva zviri muupenyu uye kutenda zvishamiso.
Basa ravo wepaterevhizheni "Medicine nokuda mbuya," vatambi inoita zvachose vakapindira yaishandiswa zvifananidzo magamba ake, asi, maererano vatsoropodzi, vakatadza kuratidza vatambi vavo chero chaiwo catchy nguva.
The series, zvinosanganisira Zvisinei Zvikamu zvina chete, zvishoma rakafanana rinozivikanwa rungano pamusoro Cinderella,, aine monyorora ano. Naizvozvo, kana imi aifarira nyaya iyi sezvo mwana, ndichiona mufananidzo zvirokwazvo kusiya yakanaka zvakakanganwika mweya wako.
"Medicine nokuti mbuya": vatambi uye zvarongwa akatevedzana
Pashure pokuona vhidhiyo iyi, Chokwadi, munhu wose anogona kuwana amene chero chipi zvacho chiitiko. Huru zano inotenderera vakaroorana vechiduku, reDare Konstantin Kryukov uye Aglaia Shilovskaya.
Iye - mudzidzi anoita unremarkable vane mwero nevakawanda zita Sonia. Iye - wechiduku akapfuma muzvinabhizimisi, akanaka murume uye kodzera tsvimborume (ZHenya Pisarev). Mumamwe upenyu kwenguva, anoziva kuti vakadzi vose muupenyu hwake akatarira pamberi Banknotes vari chikwama, uye akarasikirwa kuona nezvekuzivikanwa kwake. Against ichi nechekumashure, Jack anosarudza kuwana musikana dzakatsarukana here ndiani chaizvo.
Saka, muna rimwe akatevedzana pakati protagonists vari vakasungira ukama, zvisingagone kukundikana kushamisa vamwe. Hazvina kukwana kuti vatambi vari firimu zvakasiyana chaizvo, saka naivowo ndezvaJehovha akasiyana mumagariro strata.
Asi, pasinei nezvose, ukama hwavo kukura nokukurumidza, uye, sokuti, romanticism uye rudo, haiperi, asi achiri firimu, sezvo muupenyu, haagoni kuva zvose pachena kufamba nechikepe. Uye nekuti vamwe zvinetso vasingagoni kudziviswa.
Pakupedzisira, Chokwadi, kufara nemagumo! Kwokupedzisira Chiitiko akakodzera akakundwa magamba.
"Medicine nokuti mbuya": vatambi uye kuedzesera yepaTV
The chakakandirwa zvinosanganisira kunyanya vechiduku vatambi. Vamwe vavo kare akawana vamwe vakawanda vari madenderedzwa vateereri, asi pane avo kuti kungosimuka munzira kuita.
The huru vachikanda
Aglaia Shilovskaya sezvo mudzidzi Sonja;
Konstantin Kryukov - muzvinabhizimisi ZHenya Pisarev;
Ekaterina Vasileva - zvichipomerwa mbuya Pisarev;
Vitaliy Saliy - shamwari Eugene;
Evgeniya Glady - achinyengera Veronica.
"Medicine nokuti mbuya," vatambi akapa vateereri rungano iwayo mafirimu kuti inoitwa kuti kutenda zvishamiso. Uyezve, firimu iri anotyora miganhu-siyana evanhu strata.
Vamwe zvatinoona dzinoti "Medicine nokuda mbuya," vatambi vakarova imwe kushingaira rusingagoni kukundikana kupa firimu imwe zest.
Romance "A Gore Good." Aktery- "Oscar mukundi"
Firimu "Wolf Creek": vatambi, mabasa uye zano
Svetlana Antonova. upenyu Filmography pachako, mapikicha
Art House, yakanakisisa munyori wacho mabhaisikopo: mazita mafirimu yavose sezvavakatarirwa
Ilene Payne - the murwi kubva "Game of Zvigaro zvoumambo"
Favorite katuni "Fixiki": vanonyanya kutaurwa. Sezvo Fixiki zita?
Gas Stoves ne gasi muchoto "Hephaestus": wongororo. The yakanakisisa Modèles
Amazing photos chirongwa anobvumira kushandura ngano kuupenyu
How kubika garikuni hovea mu multivarka
Pfupiso of hypermarket vana zvinhu "Buble Gum"
Audi RS6 - aSatani mwoyo
Fish Arctic cod, vagari nechokuchamhembe mumakungwa
Dzemauto broccoli. Idya zvinonaka apo kudhayeta
Leonid Haritonov: Biography, Filmography, upenyu hwomunhu
Ndinogona kutora "Phenazepam" panguva pamuviri?
Ndeupi musiyano pakati pezvishoma uye zvepamusoro zvinodiwa? Munhu anoda chii?